Waqtiga Ay Barcelona Qabayso Shirka Jaraa'id Ee Shaacinta Caydhinta Valverde Oo La Shaaciyay Iyo Tababare Cusub Oo Camp Nou Loo Cumaadadayo. - Gool24.Net
Waqtiga Ay Barcelona Qabayso Shirka Jaraa’id Ee Shaacinta Caydhinta Valverde Oo La Shaaciyay Iyo Tababare Cusub Oo Camp Nou Loo Cumaadadayo.
January 13, 2020 Mahamoud Batalaale
Waxaa soo dhamaaday shirkii u socday boodhka kooxda Barcelona waxayna maamulka Barca go’aan ku gaadheen in shaqada laga caydhiyo Ernesto Valverde waxayna sidoo kale boodhka Barca ka doodeen macalinka Valverde badalaya.
Kooxda Barcelona ayaa ku dhawaaqday in ay dib u dhigeen shirkii jaraa’id ee ay qaban lahayeen madax wayne Bartomue iyo agaasimaha ciyaaraha ee Eric Abidal waxaana shirkan jaraa’id loo riixay barri.
Laakiin caawa waxay Barcelona bixin doontaa war saxaafadeed lagu shaacin doono mustaqbalka Valverde iyada oo la sugayo in ay si rasmi ah Barca ugu dhawaaqi doonto caydhinta Valverde.
Sida la ogaaday waxay Barcelona war saxaafadeed soo saari doontaa marka ay saacada geeska Afrika tahay 11:00 habeenimo waana waqtiga la sugayo in Valverde si rasmi ah shaqada looga caydhiyay.
Waxa kale oo la xaqiijiyay in Quique Setién uu hadda noqday tababaraha ugu cad ee Valverde badali doona iyada oo uu jiro wada xaajood ka dhex socda Barca si ay heshiiskan u dhamaystiraan.
Waxaa hadda soo dhamaatay shaqo ka caydhintii Valverde waxaana saacadaha soo socda lagu dhawaaqi doonaa in si rasmi ah looga qaaday xilkii tababaranimo iyada oo haddaba ay wararku sheegayaan in Valverde uu alaabtiisii ka urursaday Barcelona.
Quique Setién ayaa la filayaa in isna lagu dhawaaqi doono in uu yahay macalinka cusub ee Barcelona iyada oo Bartomeu iyo Eric Abidal ay shir jaraa’id qaban doonaan barri markaas oo la filayo in Quique Setién uu isna qayb ka noqon doono shirkan jaraa’id.
RAC 1 ayaa lagu shaaciyay in wakiilka Quique Setién uu haddaba soo gaadhay Camp Nou si uu ula xaajoodo kooxda Barcelona si uu Setien u noqdo badalka Valverde.
Waxaa hadda la sugayaa in saacad kadib ay Barcelona soo saari doonto war saxaafadeed rasmi ah oo ay ku shaacinayaan shaqo ka caydhinta Valverde laakiin ilaa hadda lama oga in ay macalinka cusub ku dhawaaqi doonaan.